Azerbaijan waxay sidoo kale u aragtaa qayb wanaagsan oo ah COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Azerbaijan Breaking News » Azerbaijan waxay sidoo kale u aragtaa qayb wanaagsan oo ah COVID-19
Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • News • Dadka • Waajib ah • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Tan iyo markii ugu horreysay ee uu dillaacay COVID-19 bishii Diseembar 2019, cudurka loo yaqaan 'coronavirus' wuxuu sii waday inuu ku faafiyo 2 milyan oo qof adduunka oo dhan wuxuuna ku faafay adduunka oo dhan taasoo keentay dhimashada in ka badan 135,000 oo qof. Ma aha tan iyo markii ifilada Isbaanishka qarni ka hor ay masiibo masiibo ah u gaysatay dadweynaha adduunka waqti aad u gaaban.
Iyada oo laga jawaabayo dhibaatadan socota, quruumaha adduunka oo dhami waxay qaateen habab kala duwan si ay isugu dayaan una yareeyaan faafitaanka fayraska oo ay ku jiraan xirnaanshaha qaranka iyo baaritaanada degdega ah si loo hubiyo qofka cudurka haya. Midowga Yurub ayaa ka mamnuucay qof kasta oo ka baxsan ururka inuu soo galo ugu yaraan 30 maalmood, wararkii ugu dambeeyay ee warbaahintu qortayna waxay soo jeedinayaan in aagga Yurub ee loo yaqaan 'Schengen' laga yaabo inuu xuduudihiisa xirnaado illaa bisha Sebtember. Wadamo badan ayaa ku dhawaaqay xirmooyin dhaqaale oo aan horay loo arag si loo xoojiyo dhaqaalaha qaranka, loo ilaaliyo shaqooyinka, loona taageero ganacsiyada. Mareykanku wuu kajawaabay, in kasta oo uu daahay, isaga oo ku dhawaaqay $ 2.2tn oo ah kicin dhiirrigelin ah si looga caawiyo xeebta adduunka ugu weyn; muhiim u ah rajada ganacsiga adduunka iyo barwaaqada guud. Marka lagu daro tallaabooyinka kor ku xusan, dugsiyadu waxay xireen guud ahaan, iyagoo ka xannibay carruurta waxbarashada muhiimka ah ee ay ugu baahan yihiin inay ku qaabeeyaan noloshooda mustaqbalka. Hoosudhaca guud ee dhaqaalaha ee soo dhawaada wuxuu caqabad adag ku noqon doonaa balaayiin adduunka oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo lagu jiro xilliyo dhib badan iyo caqabado aan dhammaanteen markhaati ka nahay, haddana weli waxaa jira sababo rajo lagu qabo.
Hoos u dhigista infekshinka iyo qaadista xaddidaadaha
Xayiraadaha ka socda Wuhan, magaalada Shiinaha ee ah halka ugu horreysa ee laga ogaado COVID-19, ayaa la qaaday ka dib ku dhowaad saddex bilood oo xirid ah. Isbaanishka, oo ka mid ah xuduuda xudunta faafida, koritaanka cudurada cusub ayaa hada hoos ugu dhacay meeshii ugu xumeyd tan iyo markii uu faafay. Tani waa war dhiirigelin leh waxayna muujineysaa in dalal badan oo sida ugu xun ay u saameeyeen uguna badnaa culeyska fayraska laga yaabo inay gaareen ama ay ku dhowyihiin heerkii ugu sareeyay ee infekshannada cusub. Xayiraadaha is-go'doominta iyo xayiraadaha lagama maarmaanka ah ee saameynta weyn ku leh dhaqaalaha adduunka iyo nolol maalmeedkeenna halkan ma joogi doonaan weligood. Waa inaan dhamaanteen midowno oo adkeysano oo aan u tudhno fikirka shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee safka hore kuwaas oo macno ahaan naftooda u biimeynaya badbaadinta tayada. Waxay macno cusub u keenaan erayga geesiyaal.
Adduun naxariis badan
In kasta oo argagaxa iyo cabsida uu fayrasku sababay, haddana waxay dhiirrigelisay naxariis waxayna noo oggolaatay inaan markhaati ka noqonno dhinaca wanaagsan ee aadanaha. Tusaalooyinka isxilqaan waxaa lagu arkaa abuurka “saacad dadka waayeelka ah” ee Australiya, iyo “saacad lacag ah” gudaha Boqortooyada Midowday ee dukaamada waawayn si loo difaaco waayeelka loona oggolaado xubnaha nugul ee dadweynaha inay raashinka uga iibsadaan goob aamin ah. Talyaaniga gudahiisa, bulshooyinka oo dhan ayaa lagu arkay iyagoo ka heesaya balakoonadooda si kor loogu qaado niyadda muwaadiniintooda walaalaha ah, taasoo keeneysa dhaqdhaqaaqyo nuqul oo adduunka oo dhan ah. Boqortooyada Midowday (UK), qaanso roobaadka ay rinjiyeeyeen carruurta si ay u taageeraan Adeegga Caafimaadka Qaranka (NHS) ayaa qurxisay daaqadaha guryaha, halka waddanka oo dhan uu istaagayo 8da fiidnimo Khamiista kasta si uu u istaago una sacabbo shaqaalaha NHS ee naftooda qatar gelinaya.
In badan oo adduunka ka mid ah ayaa isugu yimid inay wax ku biiriyaan lacag iyo noocba iyagoo iskaa wax u qabso ku caawinaya kuwa ugu nugul. Mr Heydarov ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay inaan idhaahdo khatarta ka imaaneysa Coronavirus, Kooxda Gilan Holding ayaa qayb yar ka qaadanaysa isku dayga joojinta faafida cudurka. Iyada oo ku saleysan ballanqaadyadeena ku aaddan Mas'uuliyadda Bulshada (CSR) iyo bulsho weynta Azerbaijan, waxaan beddelnay hoteelkeenna hudheello si loogu adeegsan karo goobo karantiil ah si looga caawiyo tallaabooyinka daryeelka caafimaad ee qaranka iyo sidoo kale loogu deeqay 1 milyan Manat sanduuqa qaranka si loola dagaallamo Covid -19. Intaa waxaa sii dheer, Gilan Textile Park waxay u wareejisay geedi socodkeeda wax soo saar si ay u sameyso 30,000 isugeyn ilaalin ah usbuucii iyo in ka badan 1 milyan oo waji qalliin ah. In kasta oo kuwan ay tilmaamno yar yihiin, waxaan rajeynayaa in ficilladani ay gacan ka geysan doonaan yareynta faafidda fayraska ee waddankayga hooyo. ”
Waqtiga qoyska oo kordhay
Tallaabooyinka ay dowladdu soo rogtay awgeed iyo rajada laga qabo waxa cudurkan macnihiisu yahay, qoysaska adduunka oo dhan waxay hadda waqti badan ku qaadanayaan midba midka kale oo ay isu imanayaan. Waalidiinta ku mashquulsan noloshooda shaqo xirfadeed hadda waxay inta badan ka shaqeeyaan guriga waxayna ku raaxeysan karaan waqti tayo leh, iyadoo carqaladeyn joogto ah ay ku hayaan wicitaanadooda shirarka, ee carruurtooda ku sugan guriga sababo la xiriira xirnaanshaha dugsiga. Mid ka mid ah cawaaqibka aan laga filayn ee cudurkan naxdinta leh ayaa ah in nalagu qasbay inaan joojino oo aan u mahadnaqno qoysaskeenna iyo kuwa aan jecel nahay marka la eego xaaladda xun ee aan la kulanno.
Ka dib guuldaradii COVID-19 - waana ka adkaan doonnaa - nolosheena weligeed isku mid ma noqon doonto, iyadoo aan rajeyneyno dareen cusub oo bulshada ah iyo muhiimadda ay leedahay in waqti tayo leh lala qaato kuwa aan jecel nahay. Dooddii ku saabsanayd sinnaanta iyo mushaharka caddaaladda ee shaqaalaha safka hore ayaa dhammaaday. Iyagu waa kuwa noogu fiican. Haddii taasi dhacdo, wax wanaagsan ayaa ka soo bixi doona masiibadan. Dabeecadda aan kala sooca lahayn ee fayraskani waxay hoosta ka xariiqaysaa dadnimadeenna guud iyo runta aan la dafiri karin ee aan ku wada joogno tan. Waa inaan midowno, wada shaqeyno, oo aan dhanka kale ka xoogsano.
Warar badan oo safarka Azerbaijan ah